कस्तो प्रकारको मामिलामा हामीले आउटडोर एलईडी डिस्प्लेमा ध्यान दिनुपर्दछ?
आउटडोर एलईडी प्रदर्शन रखरखावमा अधिक ध्यान केन्द्रित गर्दछ, जसले हावा र वर्षाको अनुभव गर्‍यो। त्यसैले हामीले राम्रो सामग्री छनौट गर्न आवश्यक छ, र अब अधिक र अधिक एलईडी प्रदर्शन निर्माताहरूले परिणामस्वरूप एलईडी डिस्प्लेको खराब गुणवत्ताको परिणाम दिन्छ जुन राम्रो सुरक्षा प्रणाली होइन।
विधि / चरण
धेरै ग्राहकहरू आउटडोर एलईडी डिस्प्ले किनेको पछि र यसमा गुणस्तर ग्यारेन्टीमा ध्यान नदिने कुराको लागि स्पष्ट छैन।
इनडोर र आउटडोर एलईडी प्रदर्शन दुई प्रकारका कार्य वातावरण हुन्, जुन बाहिरी LED प्रदर्शनको लागि बाह्य वातावरणमा बढी ध्यान दिन आवश्यक छ।
कृपया निम्न बुँदाहरूको लागि ध्यान दिनुहोस्:
१. प्रदर्शन आउटडोरको लागि स्थापित गरिएको छ, प्राय: सूर्य र वर्षा, हावा र धुलो कभर, कमजोर काम वातावरणमा। इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरू नम हुनेछ वा गम्भिर नमले शर्ट सर्किट वा आगोलाई निम्त्याउँदछ, असफलता वा आगोको कारण हुने, नोक्सान गराउने।
२. प्रदर्शन चर्को चुम्बकीय क्षेत्र आक्रमणको कारणले हुन सक्छ।
परिवेशको तापमान धेरै परिवर्तन हुन्छ। प्रदर्शन आफैंमा निश्चित गर्मी उत्पादन गर्न कार्य गर्दछ, यदि परिवेश तापक्रम अधिक उच्च र न्यून तातो छ भने, एकीकृत सर्किट असामान्य, वा जलेको पनि काम गर्न सक्छ, ताकि प्रदर्शन प्रणाली राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन।
Ide. व्यापक श्रोताहरू, दर्शन आवश्यकताहरू, दृष्टि आवश्यकताहरूको विस्तृत क्षेत्र, परिवेशको प्रकाशमा ठूलो परिवर्तनहरू, विशेष गरी प्रत्यक्ष सूर्यको प्रकाशको सम्पर्कमा पर्न सक्छ।
माथिको विशेष आवश्यकताहरूको लागि, आउटडोर प्रदर्शन यी मुद्दाहरू गरिनु पर्छ:
पहिलो, स्क्रिन बॉडी र भवन वाटरप्रूफ र चुहावट प्रमाणको लागि कडा संयोजन हुनुपर्छ।
एक पटक पानीको घटना राम्रोसँग डिस्चार्ज गर्न सकिएपछि स्क्रिनको बडी राम्रो निकासीको उपायमा हुनुपर्दछ। प्रदर्शन र भवनहरूमा लाइटनिंग सुरक्षा उपकरण स्थापना गर्नुहोस्। प्रदर्शन ग्राउंड र शेल राम्रो ग्राउन्डिंग कायम गर्न। र ग्राउन्डि resistance् प्रतिरोध oh ओम भन्दा कम छ, बिजुलीको ठूलो प्रवाहको समयमै डिस्चार्जले गर्दा।
दोस्रो, भेन्टिलेशन उपकरण कूलि install स्थापना गर्नुहोस्, ताकि स्क्रीनको तापक्रम -१० ℃ -℃० between बीचमा। स्क्रिनको माथि पछाडि अक्षीय फ्यान पनि स्थापना गरियो, गर्मी बाहेक।
-40० prevent -80० operating को अपरेटि temperature तापमान प्रयोग गर्नुहोस् औद्योगिक-ग्रेड एकीकृत सर्किट चिपको बीचमा जाडोको तापमान रोक्न अत्यधिक कम छ ताकि प्रदर्शन सुरू हुन सक्दैन।
अन्तमा, वातावरणलाई सुनिश्चित गर्न को लागी कडा लामो दूरी को दृश्य को मामला मा, तपाई अल्ट्रा-उच्च चमक प्रकाश-उत्सर्जक डायोड को उपयोग गर्नु पर्छ।
प्रदर्शन मिडिया चयनले नयाँ चौडा दृश्य कोण, शुद्ध रंग, एकरूप समन्वय र १०,००,००० घण्टा भन्दा लामो आयु छनौट गर्दछ। डिस्प्ले माध्यमको बाहिरी प्याकेजिंग वर्ग ट्यूब, सिलिकॉन सील, कुनै मेटल असेंबलीको साथ छेउ कभरको साथ सबैभन्दा लोकप्रिय छ। यसको उत्कृष्ट उपस्थिति सुन्दर, टिकाऊ, सूर्य-सूर्य प्रत्यक्ष, धुलो, पानी, उच्च तापमान, पाँच एन्टी "सुविधाहरू" को साथ।